Nhau - Zvirimwa Zvinofanira Kushandisa Kukura Mwenje?
Zvirimwa Zvinofanira Kushandisa Kukura Mwenje?
Zvirimwa zvose zvinoda kuita photosynthesis kuitira kuti zvikure.Kunyange mosses iyo inonyanya kushivirira mumvuri inoda chiedza chakajeka kuti irarame.Zvidyarwa zvakasiyana-siyana zvinoshivirira mumvuri zvinowanzowanikwa pamusika zvinofanirwa kuchengetedza mwenje wakakodzera kuti urarame.Nzvimbo ine rima zvachose.Kana nharaunda yanyanya kusviba, chiedza chechirimwa chinofanira kushandiswa here?
Ndakamboona marambi akawanda ezvirimwa, uye ese anoburitsa mwenje wepepuru kana wepingi, zvinotaridzika zvinoshamisa.Kana iwe ukabatidza mwenje iyi kumba uye ukawedzera chiedza kumiti, ichaita sechiedza chepingi uye chepepuru kunze.Kusanzwisiswa nevamwe kuti kumba kwangu kwakaipa.
Asi iwe unofanirwa kuziva kuti huwandu hwezvizhinji zvezviedza zvezvino zvinomera hazvina kururama, uye lumens haina kukwana, kureva kuti, kusimba kwechiedza hakuna kukwana, uye zvinodiwa zvekukura zvemiti hazvina kukwana.
Naizvozvo, mwenje wekuzadza kana mwenje wekudyara watinowanzo kushandisa ikozvino unogona kungoshandiswa sekuwedzera kwechinguvana kuchengetedza zvirimwa zvipenyu, uye hazvigone kutsiva chiedza chezuva.
Miti yakajairika yemukati inogona kukura zvakanaka pasi pemwenje wezvirimwa kwenguva pfupi.Kazhinji, vanogona kuchengetedza mamiriro akanaka mukati memwedzi miviri kana mitatu.Somuenzaniso, kana pasina chiedza chezuva muchando, kana kuti mumamiriro okunze emvura, marambi ezvirimwa anogona kushandiswa zvakakodzera.